“မလုပျနိုငျဘူး” “အားနညျးတယျ” “မကြှမျးဘူး” ဒီစကားတှကေို တျောတျောမြားမြား သုံးဖူးကွမယျ ထငျပါတယျ။
ကြှနျတျောကိုယျတိုငျလညျး ခနခန သုံးခဲ့ဖူးပါတယျ။ တဈခြို့တှကေ ဒီစကားကို ပွောရုံလောကျသာ ပွောကွပမေယျ့ တဈခြို့ကတြော့ ဒီစကားရဲ့ နောကျမှာ ပုနျးကှယျပွီး ကိုယျအားနညျးတဲ့ အရာကို ရငျဆိုငျဖို့ ခေါငျးရှောငျတာမြိုး၊ ထှကျပွေးတာမြိုး လုပျတတျကွပါတယျ။
ကြှနျတျောလညျး လုပျခဲ့ဖူးပါတယျ ကြှနျတျောက ကှနျပြူတာနဲ့ ပကျသကျလာရငျ အရမျးအားနညျးတာပါ။ သငျပေးလညျး နားမလညျ၊ ပွောလညျး မမှတျမိ၊ ခေါငျးထဲ ဘာဆိုဘာမှ မရှိတဲ့အခါ တဖွညျးဖွညျး ကွောကျလာတယျ၊ မလလေ့ာ ခငျြတော့ဘူး၊
“ကြှနျတျောက ကှနျပြူတာနဲ့ ပကျသကျရငျ အားနညျးတယျ” ဆိုပွီး ခေါငျးရှောငျနမေိတယျ။ ပွောရရငျ စာမရတဲ့ ကလေးတဈယောကျ ကြောငျးတကျရမှာ ကွောကျနသေလိုပေါ့။
ဒါပမေယျ့ အကြိုးဆကျက ဘာဖွဈလာလဲ ဆိုတော့ ကှနျပြူတာနဲ့ ပကျသကျတာ ကြှနျတျောဘာမှ မသိတော့ဘူး၊ အားလုံးနီးပါး သိကွတဲ့ အရာကိုတောငျ ကြှနျတေျာ့အတှကျ နားလညျဖို့ ခကျနတေယျ၊ ကိုယျတိုငျကလညျး အရမျးကို နောကျကကြနျြခဲ့တယျ၊ လှယျလှယျ လုပျလို့ ရနတေဲံ့ အရာကို မလုပျတတျတော့ဘူး၊ သိရမယျ့အရာတှေ သိခှငျ့မရတော့ဘူး။
နောကျမှ တဖွညျးဖွညျး နားလညျလာတယျ ကိုယျသတ်တိမရှိခဲ့လို့ ကိုယျရမယျ့ အခှငျ့အရေးနဲ့ အကြိုးအမွတျတှကေို “မလုပျနိုငျဘူး” ဆိုတဲ့ စိတျနဲ့ ကိုယျတိုငျဖကျြဆီးခဲ့မိတာပဲ။ အားနညျးခကျြကို အကွောငျးပွပွီး ရှဆေ့ကျတိုးဖို့ ကွောကျနခေဲ့မိတာလေ။
ကြှနျတေျာ့လိုမြိုးတှေ တဈခြို့ ရှိကွမယျထငျပါတယျ မတူညီတဲ့ အကွောငျးပွခကျြ ကိုယျစီနဲ့ အကွောကျတရားတှပေေါ့။
ကိုယျတဈခုခုအပျေါမှာ အားနညျးတာ၊ မကြှမျးကငျြတာမြိုးက လူတိုငျးမှာ တဈခုမဟုတျ တဈခုတော့ ရှိတတျပါတယျ ပွီးတော့ ဒါကိုယျ့အပွဈလညျး မဟုတျပါဘူး။
ဒါပမေယျ့ အားနညျးပါတယျဆိုပွီး ပဈထားခဲ့ရငျ၊ ခေါငျးရှောငျခဲ့ရငျတော့ ကိုယျ့အမှားပဲ ဖွဈသှားမှာပါ။ ဒီလိုမြိုးသာ ဆကျသှားနမေယျဆိုရငျ အကွောကျတရားက ပိုပိုပွီး ကွီးလာလိမျ့မယျ။
“မလုပျနိုငျဘူး အားနညျးလို့” ဆိုတာကို နရောတကာ သုံးမိနလေိမျ့မယျ။ တခွားအရာတှကေိုတောငျ စမျးသပျဖို့ သတ်တိနညျးလာလိမျ့မယျ။ ဒီလိုဆို အားနညျးခကျြ သေးသေးလေးက အကွီးမားဆုံး အကွောကျတရား ဖွဈလာမယျ မတိုးတကျနိုငျတော့ဘူးလေ။ ဒါကွောငျ့ ဒီလို အကငျြ့လေးတှကေို ပွငျပေးဖို့ လိုအပျတာပေါ့။
မှနျပါတယျ ဒီလိုအကွောကျတရား ထဲကနေ ရုနျးထှကျနိုငျဖို့ တကယျမလှယျပါဘူး။ ဒီလိုမြိုး ရုနျးထှကျပွီး ရငျဆိုငျနိုငျဖို့ အရငျဆုံး စိတျဓာတျက အရေးကွီးပါတယျ။
ပွီးရငျ လကျတှေ့ လုပျဆောငျမှုလညျး လိုအပျပါတယျ။ စိတျဓာတျပွငျးထနျမှုနဲ့ လကျတှေ့ ပူးပေါငျးမှပဲ အောငျအောငျမွငျမွငျ ရုနျးထှကျနိုငျမှာပါ။ ဒါဆိုရငျ အားနညျးခကျြတှကေို ရငျဆိုငျနိုငျဖို့၊ မလုပျနိုငျဘူးဆိုပွီး ပုနျးနတောတှေ မဖွဈတော့အောငျ ဘယျလို နညျးလမျးလေးတှနေဲ့ ကြျောဖွတျကွမလဲ ကွညျ့ကွညျ့ရအောငျနျော။
တဈခါတညျးနဲ့ အကွီးကွီးတှေ သှားလုပျလို့ မဖွဈတာမို့ ကိုယျအားနညျးခဲ့ပါတယျ ဆိုတဲ့ အရာကို ဟိုး အောကျခွကေနေ တဈဆငျ့ခငျြး လလေ့ာပါ။
ကိစ်စရပျတှေ အမြားစုမှာ အခွခေံက အရေးကွီးဆုံးမို့ တဈခါနဲ့ မရရငျ နှဈခါ သုံးခါလောကျ ဖွဈဖွဈ အောကျခွကေို နောကွပေိုငျနိုငျအောငျ ကွိုးစားပါ။
တဈခါတညျးနဲ့ တတျသှားမယျတော့ မထငျပါနဲ့။ အဲလို အမြားကွီး မြှျောလငျ့လှနျးပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အထငျကွီးတာကလညျး မကောငျးပါဘူးနျော။
ဒါကွောငျ့ စိတျကို ရှငျးရှငျးထားပွီး အခွခေံကို မကြှမျးကငျြမခငျြး လလေ့ာပါ။ အောကျခွကေို ပိုငျနိုငျသှားရငျ နောကျတဈဆငျ့ဆိုတာ လှယျကူလာပါလိမျ့မယျ။ ပွီးတော့ သတ်တိလညျး ပိုရှိလာမှာပါ။
ကိုယျက လတေ့ော့လလေ့ာပါရဲ့ ဒါပမေယျ့ နားမလညျပါဘူး၊ ဘာမှမထူးပါဘူး ဆိုပွီး လကျမလြှော့လိုကျပါနဲ့။ နညျးလမျးဆိုတာ အမွဲရှိပါတယျ။
ဒီတဈနညျးနဲ့ လလေ့ာလို့မှ နားမလညျဘူးဆိုရငျ နောကျတဈနညျးနဲ့ စမျးသပျပါ။ ကိုယျနားလညျ သဘောပေါကျတဲ့အထိ နညျးလမျးအမြိုးမြိုးနဲ့ ကွိုးစားကွညျ့ပါ။
စာဖတျလို့ နားမလညျရငျ Video ကွညျ့တာပဲ ဖွဈဖွဈ အဲလိုမြိုးတှပေေါ့။ တဈခြို့တှကေ တဈမြိုးလောကျ စမျးပွီး အဆငျမပွတောနဲ့ “လုပျတာပဲ မရဘူး” ဆိုပွီး လှယျလှယျ အရှုံးပေးတတျပါတယျ။
စိတျဓာတျကွံခိုငျဖို့ လိုအပျပါတယျနျော။ နညျးလမျးမြိုးစုံ ထောငျ့ပေါငျးစုံကနေ ကွိုးစားပွီးမှ လုံးဝမဖွဈနိုငျဘူးဆိုရငျတော့ တဈမြိုးပေါ့။ အရငျဆုံး နညျးလမျးတှေ ရှာပွီး စမျးသပျကွညျ့ပါ အဆငျပွတော တဈခုခုတော့ သခြောပေါကျ ထှကျလာပါလိမျ့မယျ။
လူဆိုတာ တဈယောကျတညျး ရှငျသနျရပျတညျဖို့ မဖွဈနိုငျသလို ဒီနရောမှာလညျး ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးက လိုအပျလာပွနျတာပါပဲ။
တဈယောကျတညျး ခကျခကျခဲခဲ သဲကွီးမဲကွီးနဲ့ လလေ့ာနတောထကျစာရငျ အဲ့ဒီနယျပယျကို စိတျဝငျစားတဲ့သူ၊ ဝါသနာပါတဲ့သူ၊
ကြှမျးကငျြတဲ့သူမြိုးနဲ့ သိထားရငျ ကိုယျလလေ့ာတဲ့နရောမှာ အမြားကွီး အထောကျအကူ ဖွဈစပေါတယျ။ ကြောငျးမှာ စာနားမလညျလို့ သူငယျခငျြးက ရှငျးပွလိုကျတဲ့အခါ ပိုရှငျးပွီး လှယျလှယျနဲ့ နားလညျသှားသလိုပဲပေါ့။
ဒါဆိုရငျ ကိုယျမသိတာတှေ၊ နားမလညျတာတှကေို သူတို့ ရှငျးပွပေးလို့ ရတယျ၊ အတူတူ ရှာဖှလေလေ့ာလို့ ရတယျ၊ သူတို့က သငျပွပေးနိုငျတယျ ပွောရရငျ ခဲတဈလုံးနဲ့ ငှကျသုံးကောငျ ပဈလိုကျသလိုပေါ့။
အပေါငျးအသငျးလညျး တိုးလာမယျ၊ သိခငျြတာလညျး သိရမယျ၊ ပြျောဖို့လညျး ကောငျးတယျလေ။ ဒါကွောငျ့ တဈယောကျတညျး ကွိတျမလုပျဘဲ အပေါငျးအသငျး နယျခြဲ့ကွညျ့ပါနျော။
စိနျချေါမှု မရှိရငျ ပြျောဖို့ ဘယျကောငျးပါတော့မလဲ။ စိနျချေါထားရငျ ပိုပွီး တကျကွှတယျ မဟုတျလား။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ စိနျချေါပါ။
ဥပမာ ဘယျနှဈလအတှငျး ကိုယျ့ရဲ့ English က ဘယျအဆငျ့ ရောကျနရေမယျ ဆိုတာမြိုးပေါ့။ အရမျးကွီးကွီးမားမား လုပျစရာမလိုပါဘူး။
သေးငယျတဲ့ အရာလေးတှကေနေ စတငျနိုငျပါတယျ သေးငယျတဲ့ အရာလေးတှေ စုပေါငျးပွီး ကွီးမားတဲ့အရာတှေ ဖွဈလာကွတာပဲလေ။
ပွီးတော့ ဖွဈနိုငျရငျ စိနျချေါမှုတှေ လုပျရငျးနဲ့ အောငျမွငျသှားရငျ ဆုပေးတာမြိုး၊ ကရြှုံးသှားရငျ ဒဏျပေးတာမြိုးလေး လုပျပေးနိုငျရငျ ပိုကောငျးပါတယျ။
ဥပမာ ကိုယျသတျမှတျထားတဲ့အတိုငျး အောငျမွငျရငျ မာလာရှမျးကော စားရမယျ၊ မအောငျမွငျရငျ နှဈရကျ ဖုနျးသုံးခှငျ့ပိတျမယျ ဆိုတာမြိုးတှပေေါ့။ ဒီလိုဆို စိတျလှုပျရှားဖို့ ကောငျးတယျလေ။
လလေ့ာတာ အရမျးကောငျးပါတယျ ဒါပမေယျ့ တဈခြိနျလုံး လလေ့ာနပွေီး လကျတှလေ့ကေ့ငျြ့တာ ဘာမှ မရှိဘူးဆိုရငျ တကယျအပွငျလောကမှာ ဘယျကစရမှနျးမသိနဲ့ ဘာမှမလုပျတတျ ဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။
ဥပမာ သငျတနျးပဲ တကျပွီး သငျထားတဲ့ဟာတှကေို မစမျးကွညျ့ရငျ အသုံးမခတြတျ ဖွဈရသလိုပေါ့။ ဒါကွောငျ့ လလေ့ာမှုနဲ့ လကျတှလေ့ကေ့ငျြ့မှု ဆိုတာ ပေါငျးစပျဖို့ လိုပါတယျ။
မဟုတျရငျ ကိုယျလလေ့ာနတော တကယျရော ရရဲ့လား၊ ဘယျလို အခွအေနမြေား ရှိနသေလဲ သိနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး ဒီလိုဆို တိုးတကျမှု နှောငျ့နှေးသှားပါလိမျ့မယျ။
ဆိုတော့ တတျနိုငျသလောကျ ကိုယျလလေ့ာထားသမြှတှကေို စမျးသပျကွညျ့တာမြိုး၊ လကေ့ငျြ့ကွညျ့တာမြိုးလေးတှေ မကွာမကွာ လုပျပေးပါ။ English စာလလေ့ာနရေငျ သူငယျခငျြးနဲ့ ပွောတာမြိုး၊ Native speaker တှနေဲ့ ပွောဖို့ ကွိုးစားကွညျ့တာမြိုးတှပေေါ့။
၆. အပွောအဆို ခံနိုငျပါစေ
ကိုယျ့အတှကျ နားလညျဖို့ ခကျခဲတဲ့အရာ၊ အားနညျးတဲ့အရာတဈခုကို လလေ့ာတဲ့အခါမှာ ခြောခြောမှမှေ့နေဲ့ သငျသှား တတျသှားနိုငျဖို့တော့ ခကျခဲပါလိမျ့မယျ။
တခွားသူတှနေဲ့ ယှဉျရငျ ကိုယျက အားနညျးနတောမို့ သူမြားထကျ တတျတာ နှေးမယျ၊ မှတျတာ နှေးမယျ၊ သငျရတာ ပိုခကျခဲလိမျ့မယျ။ အဲဒီအခါကရြငျ တဈခါတဈလေ ဆရာတှကေ ဆူတာမြိုးလညျး ရှိနိုငျတယျ၊ သူငယျခငျြးက စိတျပကျြတာမြိုးလညျး ဖွဈနိုငျတယျ၊ သူမြားတှကေ ညံ့လိုကျတာ ဆိုပွီး ဝိုငျးရီကွတာလညျး ဖွဈနိုငျတာပဲ၊ အမြိုးတှကေ နှိမျကွတာလညျး ဖွဈနိုငျတယျ။
အငွိမျမနနေိုငျတဲ့ ပတျဝနျးကငျြကတော့ တဈခုမဟုတျ တဈခု ပွောမှာ အသအေခြာပဲလေ။
အဲဒီအတှကျ အပွောအဆို ခံနိုငျအောငျ စိတျဓာတျကို ကွိုတငျ ပွငျဆငျထားပါ ဒါမှသူမြားပွောတိုငျး လှယျလှယျနဲ့ လဲပွိုမသှားမှာပါ။
ကိုယျ့အောငျမွငျမှုကိုတော့ အလဲအထပျ မလုပျသငျ့ဘူးလေ။ ဒါကွောငျ့ အဆိုးဆုံး အခွအေနတှေအေထိ ကွိုတငျပွငျဆငျထားပါ တှေးထားပါ။ ဒါဆိုရငျ ရငျဆိုငျရ ပိုလှယျကူမှာပါ။
လိုအပျတာလေးတှတေော့ ပွောပွပွီးပွီနျော။ “မလုပျနိုငျဘူး အားနညျးတယျ မကြှမျးဘူး” ဆိုတဲ့ စကားတှရေဲ့ နောကျကနေ ထှကျလာပွီး ရငျဆိုငျဖို့ပဲ ကနျြပါတော့တယျ။
ဖောကျထှကျပွီး ရငျဆိုငျမှပဲ ကမ်ဘာအသဈ ဆိုတာကို ဖနျတီးနိုငျမှာပါနျော။ မဟုတျရငျ အိမျမကျသကျသကျနဲ့ ပွီးသှားပါလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ပိတျမထားပါနဲ့ ထှကျလာခဲ့ပါ ရငျဆိုငျလိုကျပါ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ ကမ်ဘာကို ကိုယျတိုငျ ဖနျတီးပါ အားနညျးခကျြတှကေို အားသာခကျြအဖွဈ ပွောငျးလဲလိုကျပါနျော။ အဆငျပွပေါစေ။
Credit : LiveTheDream
“မလုပ်နိုင်ဘူး” “အားနည်းတယ်” “မကျွမ်းဘူး” ဒီစကားတွေကို တော်တော်များများ သုံးဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ခနခန သုံးခဲ့ဖူးပါတယ်။ တစ်ချို့တွေက ဒီစကားကို ပြောရုံလောက်သာ ပြောကြပေမယ့် တစ်ချို့ကျတော့ ဒီစကားရဲ့ နောက်မှာ ပုန်းကွယ်ပြီး ကိုယ်အားနည်းတဲ့ အရာကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ခေါင်းရှောင်တာမျိုး၊ ထွက်ပြေးတာမျိုး လုပ်တတ်ကြပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ် ကျွန်တော်က ကွန်ပျူတာနဲ့ ပက်သက်လာရင် အရမ်းအားနည်းတာပါ။ သင်ပေးလည်း နားမလည်၊ ပြောလည်း မမှတ်မိ၊ ခေါင်းထဲ ဘာဆိုဘာမှ မရှိတဲ့အခါ တဖြည်းဖြည်း ကြောက်လာတယ်၊ မလေ့လာ ချင်တော့ဘူး၊
“ကျွန်တော်က ကွန်ပျူတာနဲ့ ပက်သက်ရင် အားနည်းတယ်” ဆိုပြီး ခေါင်းရှောင်နေမိတယ်။ ပြောရရင် စာမရတဲ့ ကလေးတစ်ယောက် ကျောင်းတက်ရမှာ ကြောက်နေသလိုပေါ့။
ဒါပေမယ့် အကျိုးဆက်က ဘာဖြစ်လာလဲ ဆိုတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ပက်သက်တာ ကျွန်တော်ဘာမှ မသိတော့ဘူး၊ အားလုံးနီးပါး သိကြတဲ့ အရာကိုတောင် ကျွန်တော့်အတွက် နားလည်ဖို့ ခက်နေတယ်၊ ကိုယ်တိုင်ကလည်း အရမ်းကို နောက်ကျကျန်ခဲ့တယ်၊ လွယ်လွယ် လုပ်လို့ ရနေတဲံ့ အရာကို မလုပ်တတ်တော့ဘူး၊ သိရမယ့်အရာတွေ သိခွင့်မရတော့ဘူး။
နောက်မှ တဖြည်းဖြည်း နားလည်လာတယ် ကိုယ်သတ္တိမရှိခဲ့လို့ ကိုယ်ရမယ့် အခွင့်အရေးနဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကို “မလုပ်နိုင်ဘူး” ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ကိုယ်တိုင်ဖျက်ဆီးခဲ့မိတာပဲ။ အားနည်းချက်ကို အကြောင်းပြပြီး ရှေ့ဆက်တိုးဖို့ ကြောက်နေခဲ့မိတာလေ။
ကျွန်တော့်လိုမျိုးတွေ တစ်ချို့ ရှိကြမယ်ထင်ပါတယ် မတူညီတဲ့ အကြောင်းပြချက် ကိုယ်စီနဲ့ အကြောက်တရားတွေပေါ့။
ကိုယ်တစ်ခုခုအပေါ်မှာ အားနည်းတာ၊ မကျွမ်းကျင်တာမျိုးက လူတိုင်းမှာ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုတော့ ရှိတတ်ပါတယ် ပြီးတော့ ဒါကိုယ့်အပြစ်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အားနည်းပါတယ်ဆိုပြီး ပစ်ထားခဲ့ရင်၊ ခေါင်းရှောင်ခဲ့ရင်တော့ ကိုယ့်အမှားပဲ ဖြစ်သွားမှာပါ။ ဒီလိုမျိုးသာ ဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင် အကြောက်တရားက ပိုပိုပြီး ကြီးလာလိမ့်မယ်။
“မလုပ်နိုင်ဘူး အားနည်းလို့” ဆိုတာကို နေရာတကာ သုံးမိနေလိမ့်မယ်။ တခြားအရာတွေကိုတောင် စမ်းသပ်ဖို့ သတ္တိနည်းလာလိမ့်မယ်။ ဒီလိုဆို အားနည်းချက် သေးသေးလေးက အကြီးမားဆုံး အကြောက်တရား ဖြစ်လာမယ် မတိုးတက်နိုင်တော့ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် ဒီလို အကျင့်လေးတွေကို ပြင်ပေးဖို့ လိုအပ်တာပေါ့။
မှန်ပါတယ် ဒီလိုအကြောက်တရား ထဲကနေ ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ တကယ်မလွယ်ပါဘူး။ ဒီလိုမျိုး ရုန်းထွက်ပြီး ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ အရင်ဆုံး စိတ်ဓာတ်က အရေးကြီးပါတယ်။
ပြီးရင် လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်မှုလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်မှုနဲ့ လက်တွေ့ ပူးပေါင်းမှပဲ အောင်အောင်မြင်မြင် ရုန်းထွက်နိုင်မှာပါ။ ဒါဆိုရင် အားနည်းချက်တွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့၊ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး ပုန်းနေတာတွေ မဖြစ်တော့အောင် ဘယ်လို နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ ကျော်ဖြတ်ကြမလဲ ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်။
၁. အောက်ခြေကနေ လေ့လာပါ
တစ်ခါတည်းနဲ့ အကြီးကြီးတွေ သွားလုပ်လို့ မဖြစ်တာမို့ ကိုယ်အားနည်းခဲ့ပါတယ် ဆိုတဲ့ အရာကို ဟိုး အောက်ခြေကနေ တစ်ဆင့်ချင်း လေ့လာပါ။
ကိစ္စရပ်တွေ အများစုမှာ အခြေခံက အရေးကြီးဆုံးမို့ တစ်ခါနဲ့ မရရင် နှစ်ခါ သုံးခါလောက် ဖြစ်ဖြစ် အောက်ခြေကို နောကြေပိုင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
တစ်ခါတည်းနဲ့ တတ်သွားမယ်တော့ မထင်ပါနဲ့။ အဲလို အများကြီး မျှော်လင့်လွန်းပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အထင်ကြီးတာကလည်း မကောင်းပါဘူးနော်။
ဒါကြောင့် စိတ်ကို ရှင်းရှင်းထားပြီး အခြေခံကို မကျွမ်းကျင်မချင်း လေ့လာပါ။ အောက်ခြေကို ပိုင်နိုင်သွားရင် နောက်တစ်ဆင့်ဆိုတာ လွယ်ကူလာပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ သတ္တိလည်း ပိုရှိလာမှာပါ။
၂. နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကြိုးစားပါ
ကိုယ်က လေ့တော့လေ့လာပါရဲ့ ဒါပေမယ့် နားမလည်ပါဘူး၊ ဘာမှမထူးပါဘူး ဆိုပြီး လက်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့။ နည်းလမ်းဆိုတာ အမြဲရှိပါတယ်။
ဒီတစ်နည်းနဲ့ လေ့လာလို့မှ နားမလည်ဘူးဆိုရင် နောက်တစ်နည်းနဲ့ စမ်းသပ်ပါ။ ကိုယ်နားလည် သဘောပေါက်တဲ့အထိ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။
စာဖတ်လို့ နားမလည်ရင် Video ကြည့်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဲလိုမျိုးတွေပေါ့။ တစ်ချို့တွေက တစ်မျိုးလောက် စမ်းပြီး အဆင်မပြေတာနဲ့ “လုပ်တာပဲ မရဘူး” ဆိုပြီး လွယ်လွယ် အရှုံးပေးတတ်ပါတယ်။
စိတ်ဓာတ်ကြံခိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်နော်။ နည်းလမ်းမျိုးစုံ ထောင့်ပေါင်းစုံကနေ ကြိုးစားပြီးမှ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။ အရင်ဆုံး နည်းလမ်းတွေ ရှာပြီး စမ်းသပ်ကြည့်ပါ အဆင်ပြေတာ တစ်ခုခုတော့ သေချာပေါက် ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
လူဆိုတာ တစ်ယောက်တည်း ရှင်သန်ရပ်တည်ဖို့ မဖြစ်နိုင်သလို ဒီနေရာမှာလည်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးက လိုအပ်လာပြန်တာပါပဲ။
တစ်ယောက်တည်း ခက်ခက်ခဲခဲ သဲကြီးမဲကြီးနဲ့ လေ့လာနေတာထက်စာရင် အဲ့ဒီနယ်ပယ်ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူ၊ ဝါသနာပါတဲ့သူ၊
ကျွမ်းကျင်တဲ့သူမျိုးနဲ့ သိထားရင် ကိုယ်လေ့လာတဲ့နေရာမှာ အများကြီး အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ ကျောင်းမှာ စာနားမလည်လို့ သူငယ်ချင်းက ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါ ပိုရှင်းပြီး လွယ်လွယ်နဲ့ နားလည်သွားသလိုပဲပေါ့။
ဒါဆိုရင် ကိုယ်မသိတာတွေ၊ နားမလည်တာတွေကို သူတို့ ရှင်းပြပေးလို့ ရတယ်၊ အတူတူ ရှာဖွေလေ့လာလို့ ရတယ်၊ သူတို့က သင်ပြပေးနိုင်တယ် ပြောရရင် ခဲတစ်လုံးနဲ့ ငှက်သုံးကောင် ပစ်လိုက်သလိုပေါ့။
အပေါင်းအသင်းလည်း တိုးလာမယ်၊ သိချင်တာလည်း သိရမယ်၊ ပျော်ဖို့လည်း ကောင်းတယ်လေ။ ဒါကြောင့် တစ်ယောက်တည်း ကြိတ်မလုပ်ဘဲ အပေါင်းအသင်း နယ်ချဲ့ကြည့်ပါနော်။
၄. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိန်ခေါ်ပါ
စိန်ခေါ်မှု မရှိရင် ပျော်ဖို့ ဘယ်ကောင်းပါတော့မလဲ။ စိန်ခေါ်ထားရင် ပိုပြီး တက်ကြွတယ် မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိန်ခေါ်ပါ။
ဥပမာ ဘယ်နှစ်လအတွင်း ကိုယ့်ရဲ့ English က ဘယ်အဆင့် ရောက်နေရမယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့။ အရမ်းကြီးကြီးမားမား လုပ်စရာမလိုပါဘူး။
သေးငယ်တဲ့ အရာလေးတွေကနေ စတင်နိုင်ပါတယ် သေးငယ်တဲ့ အရာလေးတွေ စုပေါင်းပြီး ကြီးမားတဲ့အရာတွေ ဖြစ်လာကြတာပဲလေ။
ပြီးတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် စိန်ခေါ်မှုတွေ လုပ်ရင်းနဲ့ အောင်မြင်သွားရင် ဆုပေးတာမျိုး၊ ကျရှုံးသွားရင် ဒဏ်ပေးတာမျိုးလေး လုပ်ပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
ဥပမာ ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း အောင်မြင်ရင် မာလာရှမ်းကော စားရမယ်၊ မအောင်မြင်ရင် နှစ်ရက် ဖုန်းသုံးခွင့်ပိတ်မယ် ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့။ ဒီလိုဆို စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ ကောင်းတယ်လေ။
လေ့လာတာ အရမ်းကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ့် တစ်ချိန်လုံး လေ့လာနေပြီး လက်တွေ့လေ့ကျင့်တာ ဘာမှ မရှိဘူးဆိုရင် တကယ်အပြင်လောကမှာ ဘယ်ကစရမှန်းမသိနဲ့ ဘာမှမလုပ်တတ် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာ သင်တန်းပဲ တက်ပြီး သင်ထားတဲ့ဟာတွေကို မစမ်းကြည့်ရင် အသုံးမချတတ် ဖြစ်ရသလိုပေါ့။ ဒါကြောင့် လေ့လာမှုနဲ့ လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှု ဆိုတာ ပေါင်းစပ်ဖို့ လိုပါတယ်။
မဟုတ်ရင် ကိုယ်လေ့လာနေတာ တကယ်ရော ရရဲ့လား၊ ဘယ်လို အခြေအနေများ ရှိနေသလဲ သိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ဒီလိုဆို တိုးတက်မှု နှောင့်နှေးသွားပါလိမ့်မယ်။
ဆိုတော့ တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ်လေ့လာထားသမျှတွေကို စမ်းသပ်ကြည့်တာမျိုး၊ လေ့ကျင့်ကြည့်တာမျိုးလေးတွေ မကြာမကြာ လုပ်ပေးပါ။ English စာလေ့လာနေရင် သူငယ်ချင်းနဲ့ ပြောတာမျိုး၊ Native speaker တွေနဲ့ ပြောဖို့ ကြိုးစားကြည့်တာမျိုးတွေပေါ့။
၆. အပြောအဆို ခံနိုင်ပါစေ
ကိုယ့်အတွက် နားလည်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့အရာ၊ အားနည်းတဲ့အရာတစ်ခုကို လေ့လာတဲ့အခါမှာ ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ သင်သွား တတ်သွားနိုင်ဖို့တော့ ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။
တခြားသူတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် ကိုယ်က အားနည်းနေတာမို့ သူများထက် တတ်တာ နှေးမယ်၊ မှတ်တာ နှေးမယ်၊ သင်ရတာ ပိုခက်ခဲလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါကျရင် တစ်ခါတစ်လေ ဆရာတွေက ဆူတာမျိုးလည်း ရှိနိုင်တယ်၊ သူငယ်ချင်းက စိတ်ပျက်တာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်၊ သူများတွေက ညံ့လိုက်တာ ဆိုပြီး ဝိုင်းရီကြတာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ၊ အမျိုးတွေက နှိမ်ကြတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
အငြိမ်မနေနိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု ပြောမှာ အသေအချာပဲလေ။
အဲဒီအတွက် အပြောအဆို ခံနိုင်အောင် စိတ်ဓာတ်ကို ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားပါ ဒါမှသူများပြောတိုင်း လွယ်လွယ်နဲ့ လဲပြိုမသွားမှာပါ။
ကိုယ့်အောင်မြင်မှုကိုတော့ အလဲအထပ် မလုပ်သင့်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် အဆိုးဆုံး အခြေအနေတွေအထိ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ တွေးထားပါ။ ဒါဆိုရင် ရင်ဆိုင်ရ ပိုလွယ်ကူမှာပါ။
လိုအပ်တာလေးတွေတော့ ပြောပြပြီးပြီနော်။ “မလုပ်နိုင်ဘူး အားနည်းတယ် မကျွမ်းဘူး” ဆိုတဲ့ စကားတွေရဲ့ နောက်ကနေ ထွက်လာပြီး ရင်ဆိုင်ဖို့ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။
ဖောက်ထွက်ပြီး ရင်ဆိုင်မှပဲ ကမ္ဘာအသစ် ဆိုတာကို ဖန်တီးနိုင်မှာပါနော်။ မဟုတ်ရင် အိမ်မက်သက်သက်နဲ့ ပြီးသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပိတ်မထားပါနဲ့ ထွက်လာခဲ့ပါ ရင်ဆိုင်လိုက်ပါ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ကမ္ဘာကို ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးပါ အားနည်းချက်တွေကို အားသာချက်အဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ပါနော်။ အဆင်ပြေပါစေ။